Anthropocene, ma ninbaa "u qalmaa" taariikh nololeed oo u gaar ah? | Saadaasha Shabakadda
David melguizo | | Kala bixid, Dhacdooyinka saadaasha hawada
Saamaynta khafiifka ah ee hawada sare
Muddo dhowr sano ah ayaa laga doodayay in bina aadamku muhiim u yahay nafteenna oo aan u qalmin da'deenna juqraafiyeed. Saamaynta weyn ee bini aadamku ku yeeshay meeraha iyo deegaankiisa oo sababay dabargoynta iyo xitaa bedelida wareegyada dabiiciga iyo cimilada waxay ka dhigaysaa inay waxbarto si loogu daro wicitaanka Antropocene miisaanka guud ee caalamiga.
Laga soo bilaabo 2009 koox caalami ah oo saynisyahano ah ayaa baranayay soo bandhigida fikraddan cusub iyo halka laga helayo bilowga xilligan. Warbixin ayaa hada la diyaarinayaa waana loo soo bandhigi doonaa Ururka Caalamiga ah ee Cilmiga Cilmiga dhulka sannadka 2016. Jidhkani waa jidhka keliya ee karti u leh go’aan ka gaadhista da'da Dunida.
Ilaa inta laga go'aansanayo in la soo bandhigo wax ka beddelkan, waxaan sii wadi doonnaa inaan ku noolaano Holocene, waqtigaas oo bilaabmay qiyaastii 12000 oo sano ka hor xilligii ugu dambeeyay ee glaciations. Cimilada dhexdhexaadka ah ee xilligan baraf-barafka waa waxa u oggolaaday bina-aadamnimada inay ku hormaro xawaaraha ay sameysay, iyo horumarkaas iyo saameynta ay ku yeelanayso adduunka aan ku nool nahay waa tan nagu dhalisay inaan bilowno inaan ka fikirno marka lagu daro a waayi cusub oo toos ula xiriirta aadanaha.
Mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee doodo badani ka taagan yihiin ayaa go'aaminaya goorta uu bilaabmay taariikhdan cusub ee cilmiga dhulka. Labada qodob ee la soo jeediyey ayaa ahaa bilowga da'da nukliyeerka badhtamihii qarnigii labaatanaad iyada oo la qarxiyay Hioshima iyo Nagasaki ka dibna shilal ay ka mid yihiin Chernobyl ama warshada tamarta ee Fukushima ay ku reebtay calaamadaha shucaaca bini’aadamka iyo badaha iyo jiinka. Dhinaca kale, ka bilowgii kacaankii warshadahal qarnigii toddoba iyo tobnaad ama xitaa ah soo bixitaanka beeraha qiyaastii 10000 sano ka hor.
Sababaha ay bixiyeen aragtiyaha kaladuwan ee lagu ogaanayo bilowga taariikhdan cusub ee juquraafiyeed waxay xiriir la leeyihiin muuqaalkiisa diiwaanka sedimentary. Aynu qiyaano dhakhtarka cilmiga cilmiga dhulka (geologist) 10000-20000 sano, waa inuu kahelaa sifooyin kala geddisan oo kujira dabaqadaha laxiriira waqtiga si uu awood ugu yeesho inuu ku aqoonsado inay tahay xilli juquraafiyeed isaga u gaar ah.
Markaad tixgeliso dhismayaashaan, laxiriira bilowga xilligan iyo muuqaalka beeraha waxaa ugu wacan xaqiiqda ah inay tahay markii uu bini aadamku bilaabayo inuu dhulka la qabsado oo uusan ula jaan qaadin dhulka. Dhaqdhaqaaqa jiirka ee bini aadamku sameeyay ilaa daqiiqadan wuxuu ka adkaan karaa wixii sababa nooc kasta oo ifafaale dabiici ah ah, u diyaarinta carrada si loo beero, iyadoo la adeegsanayo dhagxaanta, iyo hadhow isticmaalka warshadaha iyo dhismaha ee qalabka dabaqa.
Dhinaca kale, tixgelinta bilowga kacaankii warshadaha oo ah halka laga bilaabayo mudadan cusub ayaa la soo jeediyay inay tahay bilowga taariikh nololeedkan, iyadoo ku doodeysa bilowga isticmaalka shidaalka shidaalka (dhuxusha, saliida, iwm.) Iyo cunsuriyada gubitaankooda lagu shubey jawiga waxay u muuqan doontaa qayb ka mid ah astaamaha dabeecadda. Isla mar ahaantaana, isticmaalka ballaaran ee dhulka iyo ka-qodista iyo macdanta ka sii daran ayaa iyaduna noqon doonta qodob kale oo lagu xisaabtamo.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, labadan soojeedin ayaa ku dhowaad meesha laga saaray, maxaa yeelay inkasta oo saameynta ay ku yeelanayso qashinku ay aad u ballaadhnaan lahayd, ma saamaynayso dhammaan dusha sare ee dhulka, xitaa sidaas oo ay tahay, waxay ku jirtaa gacanta Ururka Caalamiga ah ee Cilmiga Cilmiga dhulka si loo go'aamiyo inay habboon yihiin iyo in kale. taariikhahaas.
Xulashada ugu fiican, iyo midda suurtagalka ah ee leh fursadda ugu wanaagsan ee lagu dooran karo, had iyo jeer haddiiba la aqbalo soo bandhigida taariikhdan cusub ee taariikhda juquraafiga, waa tan bilowga da'da nukliyeerka ama atomiga. Labada tijaabo ee nukliyeerka iyo shilalka ka dhaca xarumaha tamarta nukliyeerka ayaa sababay walxaha shucaaca ayaa ku jira dhulka dushiisa oo dhan oo waxaa lagu sii hayn doonaa dhulka, biyaha iyo hawada sannado badan, ka dhig ballaadhinta noocyada noocan ah ayaa ku filan in loo tixgeliyo ballaadhinta adduunka.
Dhiirrigeliyaha fikradan ugu dambeysay, Jan Zalasiewicz, Saynisyahan ka tirsan Jaamacadda Leicester ayaa ku adkeysanaya in marka laga soo tago saameynta nukliyeerka ay jiraan arrimo kale sida saameynta aadanaha iyo tiknoolajiyadiisa iyo sidoo kale muuqaalka maaddooyinka sida balaastigga ama aluminium ama isku-uruurinta CO2 ee jawiga iyo aashitaynta badaha ayaa noo horseedaya inaan ka hadalno "Dardar-Gelin Weyn" oo u qalantaa "sharaftaan".
Wax walba waxay ku kacaan kharashka noolaha mas'uulka ka noqon doona sanadka 2016 si loo qiimeeyo qodobbadan oo dhan loona ogaado haddii bini'aadamku u qalmo kaligiis joqraafi ahaan iyo waxa uu noqon doono bilowgiisa, ama haddii uu lid ku yahay, sida ay u maleynayaan qayb kale oo weyn oo ka mid ah bulshada sayniska "waxaan kaliya dooneynaa inaan nafsadeena siino muhiimad ka badan tan runta aan haysanno."
Macluumaad dheeraad ah: Kulaylinta Dunida ee aan laga leexan karin ayaa kor u qaadi doonta badda wax ka badan mitir; Dhulka oo dhami weligiis ma barafoobay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Anthropocene, ma ninbaa "u qalmaa" taariikh nololeed oo u gaar ah?
Mar waa Mars, sheeko gaaban oo ah isbeddelkeeda cimilada